Miaraka amin’i Rosia sy Shina ny firenena Karibeana amin’ny fanohanana an’i Venezoela araka ny sarintanin’izao tontolo izao nasehon’ny Foreign Policy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2019 5:36 GMT
Namoaka sarintany izay nilaza fa maneho ireo fanohanana manerantany amin'ny krizin'i Venezoela ny Foreign Policy. Ity sarintany ity dia toa nanasongadina ny firenena CARICOM telo dia i St. Vincent sy Grenadines, Dominica ary Suriname- ary nanamarika azy ireo tao anaty tabilao miaraka amin'ny fanazavana, nametraka azy ireo ao amin'ny “Mpanohana an'i Nicolás Maduro” miaraka amin'ireo firenena lehibe tahaka an'i Rosia, Shina, Iran ary Torkia.
Mety mahaliana tokoa izany raha ara-jeôgrafia politika, saingy tsy maneho taratra ny zava-misy marina. Ny firenena miisa 12 amin'ireo 15 ao amin'ny CARICOM no niara-naneho ny toerana misy azy ao Venezoela, noho izany dia tsy ampy firenena miisa 9 ao amin'ny CARICOM ny lisitry ny Foreign Policy, miampy ny firenena roa hafa- Haïti sy Bahamas- izay naneho ny fanohanany an'i Guaidó.
Ny toerana misy ny CARICOM ihany koa dia iray amin'ny tsy fitsabahana sy tsy fitongilanana. Araka ny nomarihin'ny olona sasany dia tahaka ny manohana an'i Maduro izany, saingy mitovy amin'ny an'i Meksika sy ny an'i Orogoay ny filazan'ny fanambarana nataon'ny CARICOM , izay samy napetraky ny Foreign Policy ao amin'ny faritry ny “Mpanelanelana” na “tsy mandany amin'ny atsy sy ny aroa fa natao ho mpanelanelana ” .
Nanolotra ny fanelanelanana ihany koa ny CARICOM, ary nanao fihaonana any Montevideo, Orogoay. amin'izao fotoana izao (7 Febroary) niaraka tamin'i Orogoay, Meksika ary ireo firenena hafa “tsy miandany amin'ny atsy sy ny aroa.”
Fitantarana hafa momba an'i Venezoelà eto amin'ny Global Voices:
Netizen Report: Ahoana ny fisehon'ny krizy politika any Venezoela amin'ny aterineto
21 ora izayTrinite sy Tobago